WARBIXIN: Waa Sidee Fursadaha Kooxdaada & Qaabka Ay Ugu Gudbi Karto Wareega 16-Ka Champions League – Kooxda.com
HomeChampions LeagueWARBIXIN: Waa Sidee Fursadaha Kooxdaada & Qaabka Ay Ugu Gudbi Karto Wareega 16-Ka Champions League
November 7, 2019 Abdiwali Adan Jamac Champions League, Wararka Maanta, Warbixino 0
Waxa la ciyaaray kulankii 4-aad ee wareega Group-yada champions League waxana haatanba booskooda wareega 16-ka halka ay 3 kooxood oo kalena xaqiiqsadeen in ay ka hadheen tartanka champions League.
Kooxaha Paris Saint-Germain, Bayern Munich & Juventus ayaa xaqiiqsaday booskooda wareega xiga ee 16-ka halka kooxaha Galatasaray, Genk & Lille ka hadheen tartanka.
Real Madrid ayaa wareega xiga u gudbi karta guul ay gaadho kulankooda 5-aad ee ay la ciyaari doonaan kooxda PSG oo ay ku marti galin doonaan garoonka Estadio Santiago Bernabeu.
Hadii ay kooxda Zidane bar-baro la gasho PSG kooxda Club Brugge-na garaacdo Galatasaray kadib waxa ay Los Blancos sugi doontaa u soo bixista wareega xiga ilaa kulanka ugu dambeeya hadii ay Los Blancos guuldaro kala kulanto kooxda reer Belguim way ka hadhayaan tartanka.
Waxa u dhexaysa 5 dhibcood PSG iyo Real Madrid kooxda tababare Zidane ayaa u baahan in ay garaacdo Kooxda reer France hadii ay rajo ka qabaan ku dhamaystiga kaalinta 1-aad ee Group-ka.
Bayern Munich ayaa haatanba wareega xiga u gudubtay kadib markii ay badisay mid kasta oo ka mid ah 4-tii kulan ee ugu horeeyay iyada oo ay ku jirto kulankii ay 7/2 ku garaacday Tottenham.
Kooxda Tottenham ayaa u soo bixi kara wareega xigalaakiin waa hadii ay kaliya garaacaan kooxda Olympiacos kulan ka dhici doona London.
Red Star Belgrade ayaa u baahan in ay garaacdo kooxaha Bayern Munich iyo Olympiacos waliba rajayso in ay Tottenham guuldaro la kulanto 2-da kulan ee ugu dambeeyo si ay u hesho fursad ay wareega xiga ugu gudubto halka Olympiacos sidoo kale u baahantahay in ay badiyaan 2-da kulan ee u hadhay hadii ay rajaynayaan in ay u soo baxaan wareega xiga.
Man City ayaa u soo bixi karta wareega 16-ka hadii ay bar-baro la galaan kooxda Shakhtar Donetsk kulanka 5-aad ama ay Dinamo Zagreb ku fashilanto in ay guul ka gaadho Atalanta.
Kaalinta 2-aad aya wali adag iyada oo ay dhamaan kooxaha Shakhtar, Dinamo & Atalanta fursad u haystaan in ay ku soo baxaan kaalinta 2-aad.
Kooxda Juventus ayaa iyagu haatanba u soo baxay wareega 16-ka kadib guushii ay ka gaadheen kooxda Lokomotiv Moscow iyo guuldaradii soo gaadhay Atletico Madrid.
Kooxda Atletico ayay u taalaa shaqo adag hadii ay doonayso in ay soo baxdo waxana ay u baahan yihiin in ay garaacaan Juventus kulanka 5-aad hadii ay doonayaan in ay u soo baxaan kaalinta 1-aad laakiin guuldaro ayaa keenaysa in ay ku xidhnaato rajadoodu kulamada kale.
Kooxda Difaacanaysa champions League ee Liverpool ayaa u soo bixi karta wareega 16-ka hadii ay Napoli ku garaacaan Anfield kulanka 5-aad.
Hadii ayna Napoli ka badin waliba kooxda RB Salzburg garaacdo kooxda Genk, wiilasha Klopp ayaa aadi doona Austria oo ay marti ugu noqon doonaan RB Salzburg iyaga oo u baahan guul ama bar-baro si ay ugu soo baxaan wareega xiga.
Guul ay Barcelona ka gaadho kooxda Borussia Dortmund kulanka 5-aad ayaa ka caawin doonta in ay u soo baxdo wareega 16-ka.
Laakiin waxa ay sidoo kale u bixi karaan hadii ay Bar-Baro la galaan Borussia Dortmund sidoo kale Inter Milan guul ka gaadhi waydo kooxda Slavia Prague.
Hadii ay Barca guuldaro kala kulanto Dortmund waxa ay u baahnaan doonaan in ay natiijo ka helaan Inter Milan kulanka ugu dambeeya hadii ay kooxda reer Italy marka hore ka badiso Slavia.
Dhamaan 4-ta kooxood ee Group-kan ayaa fursad u haysta in ay u gudbaan wareega xiga ee 16-ka.
RB Leipzig ayaa hogaaminaysa Group-ka waxana ay u baahantahay bar-baro ay la gasho Benfica kulanka 5-aad.
Sidoo kale Lyon ayaa u gudbi karta wareega xiga hadii ay garaacdo Zenit kulanka 5-aad.
3 koox oo ka mid ah Group-kan ayaa sidoo kale fursad u haysat in ay koox walba iska xaadiriso wareega xiga ee 16-ka tartanka.
Valencia ayaa iska xaadirin karta wareega xiga hadii ay garaacdo chelsea kulanka 5-aad.
Laakiin hadii ay Chelsea garaacdo Valencia kooxda Lampard ayaa iska xaadirin doonta wareega Xiga halka ay Ajax iska xaadirin karto wareega xiga hadii ay garaacdo Lille waliba Valencia iyo chelsea bar-baro galaa.
XASAASI: Xiddig Muhiim U Ah Liverpool Oo Seegay Tababarka Liveprool Ka Hor Kulanka Man City, Miyuu Seegayaa Kulanka Axada?.